सांसद यादवको सुटुक्क राजीनामा, चर्चामा सीके राउत - Pahilo News
सप्तरी, २९ साउन । सप्तरी क्षेत्र नम्बर–१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. सूर्यनारायण यादवले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित यादवले पार्टी (समाजवादी) लाई जानकारी नदिई संसद् सचिवालयमा राजीनामा पेस गरेका हुन् । राजीनामा दिनुको कारणबारे सांसद यादवले केही बोल्न चाहेनन् ।
समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव प्रकाश अधिकारीले डा. यादवको राजीनामाबारे पार्टीलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘उहाँले किन राजीनामा दिनुभयो, थाहा हुन सकेको छैन’, अधिकारीले भने, ‘हामी यसबारे बुझ्दै छौं ।’ डा. यादव जनकपुरका बालरोग विशेषज्ञ हुन् । राजनीतिमा खासै सक्रिय नदेखिएका डा. यादव निर्वाचनमा एक्कासि फोरमको उम्मेद्वारका रूपमा चुनावी मैदानमा देखिएका थिए ।
पार्टी स्रोतका अनुसार अध्यक्ष यादव र सांसद डा. यादवबीच ५–६ महिनायता मनमुटाव देखिँदै आएको थियो । सांसद यादव निकट एक नेताले अध्यक्ष यादव सरकारमा गएपछि सांसद यादव स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बन्ने दाउमा रहेको बताए । तर अध्यक्ष यादवले अर्का चिकित्सक डा. सुरेन्द्र यादवलाई राज्यमन्त्री बनाएपछि उनी चिढिएका थिए ।
सांसद यादवको राजीनामा उपचुनावसँग जोड्न थालिएको छ । यादवको राजीनामा स्वीकृत भएमा सप्तरी १ मा उपचुनाव हुन्छ । उपचुनाव भएमा सीके राउतले उम्मेदवारी दिने चर्चा सामाजिक सञ्जालमा हुन थालेपछि जनमत पार्टीले खण्डन गरेको छ ।
जनमत पार्टीका प्रवक्ता अब्दुला खाणले राउत उपनिर्वाचनमा सहभागी हुने योजना नरहेको प्रस्ट पारे । यद्यपि उनले जनमत पार्टी निर्वाचनविरोधी नभएको बताए ।
सीके निकट मानिने जनमत पार्टीका नेता दीपक साहले उपचुनावबारे पार्टीमा छलफल नचलेको बताए । ‘उपचुनावका विषयमा पार्टीमा छलफल भएको छैन,’ साहले भने, ‘छलफल नै नभएको विषयमा अहिल्यै केही बताउन सकिन्न ।’
जनमत पार्टीले भदौ १ गतेदेखि काठमाडौं र जनकपुरबाट पार्टी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउँदैछ । गत फागुनमा मूल धारमा आएका सीके राउत निर्वाचन आयोगमा जनमत पार्टी दर्ता गराएर पार्टी गतिविधिमा सक्रिय भएका छन् । अन्नपूर्ण पोष्टबाट